ONLF iyo Liyu Boolis: Shalay cadaw ayey isu ahaayeen. Sidee maanta u wada joogaan ayagoo hub haysta? |
Gobollada iyo tuulooyinka Dawlad Deegaanka Soomaalida waxaa ku wada sugan ciidammada Liyuu booliiska iyo askar ka tirsan Jabhadda ONLF oo xabbad joojin iskeed ah ku dhawaaqday.
Arrintan ayaa timid ka dib markii ra’iisulwasaaraha cusub ee Itoobiya Abiy Axmed uu isbadal baaxad leh ku sameeyay siyaasaddii ku wajahnayd jabhadaha ay ONLF ka mid tahay.
Baarlamaanka dalka Itoobiya ayaana ayiday siyaasaddii cusbayd ee Abiy, iyaga oo liiska argagixada ka saaray ONLF iyo jabhado kale.
Markii ay Itoobiya si la yaab leh u badashay siyaasaddeedii ONLF, masuuliyiinta jabhaddu waxay ka dageen Addis Ababa iyo Jigjiga si ay isbadalka dhacay uga faa’iidaystaan.
Askartoodii oo xabbad joojinta ka faa’iidaysanaya duurkii ayay ka soo baxeen oo magaalooyiin iyo tuulooyinka ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay.
Arrinta ay dad badan la yaabeen ayaa noqotay in ay arkaan cadawgii hore (ONLF iyo Liyuu Booliis) oo shaah wada cabaya iyadoo uusan dareen dhex oolin.
Qaar ka mid ah shacabka Dawlad Deegaanka Soomaalida ayaa dhankooda sheegay in ay ku diirsadeen colaadda labada dhinac ee istaagtay.
“Si wadajir ah oo walaaltinimo leh halagu wada joogo inta uu nin walba gaarayo nidaamka uu doonayo, wax kalifaya in ay dagaalamaanna ma jirto” ayuu yiri Nuur Maxamed oo ka mid ah shacabka magaalada Jigjiga.
Image captionLiyuu Boolis wa ciidan uu abuuray madaxweynihii hore Cabdi Maxamuud Cumar
Liyuu booliiska ayaa dhirbaaxo kulul ku dhuftay cudduddii ciidan ee ONLF, sida ay ku faani jirtay xukuumaddii uu hogaaminayay Cabdi Maxamuud Cumar.
Balse sii hayaha madaxweynaha ee Dawlad Deegaanka Soomaalida Mustafe Muxumed Cumar ayaan cadaw u arag ONLF, taas baddalkeedana wuxuu u arkaa halyeeyo iyo mujaahidiin.
“Waxaa waajib ah in aan xusno geesiyaashii naftooda u huray inay dadkooda ka dulqaadaan heeryada guumaysiga” ayuu yiri Mustafe oo wakhti hore soo dhigay qoraal barta uu ku leeyahay Facebook.
Waxaan khadka talafoonka ku wada hadalnay marwo Samiira Cabdiraxmaan oo ah xaaskii uu ka geeriyooday naftihure hayley Sheikh Deeq. Waxaan ballan qaadnay inaan la korin doonno agoonta mujaahidka. Waxaa waajib ah in aan xusno geesiyaashii naftooda u huray inay dadkooda ka dulqaadaan heeryada guumaysiga.
ONLF qudhooda ayaan xasaasiyad wayn ka qabin kuwii ay shalay islaynayeen waxayna u arkaan in iyaga iyo Liyuu Booliis ay yihiin labo walaalo ah oo cadaw isku dilayay.
“Liyuu booliis waxaan u aragnaa xoog dadkeenu leeyahay, waxaa nagu hareeraysan xoogag badan oo danteenna ka soo horjeeda, marka maanta umadda Soomaaliyeed ma kari karto intay is khilaafto in ay iyadu isku mashquusho” ayuu yiri Xoghayaha Guud ee ururka ONLF Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi (Maadeey) oo waraysi gaar ah siiyay BBC.
Si kastaba ha ahaatee cadawgii shalay ayaa hadda wada caweeya, waxaase la is weydiinayaa sida loo xal waara loogu heli karo colaaddii wakhtiga dheer dhex taallay labada dhinac.